Samsung's Galaxy Fit 2 ayaa hadda laga heli karaa Spain lacag dhan 49 euro | Androidsis
Haddii aan ka hadalno tirinta jijimooyin ku jira suuqa hadda jira, waa inaan ka hadalnaa Xiaomi Mi Band, oo ah moolalka u oggolaaday malaayiin dad ah adduunyada ku soo gali qiimeeyayaasha qiime jaban. Markii sanadihii la soo dhaafay, Xiaomi waxay ku soo kordhineysay howlo cusub kooxda Mi Band, taasoo u saamaxday inay sii wado inay tixraac u noqoto suuqa.
Isticmaalayaasha ma haystaan ​​jijin tiris ah, waxay leeyihiin Mi Band. Samsung, sida Fitibt, waxay isku dayday inay la qabsato suuqa ay Xiaomi abuurtay iyagoo bilaabay jijimooyin ka jaban, Galaxy Fit 2 waa sharadkii ugu dambeeyay ee Samsung, jijin kaliya ku degay Spain 49 euro.
Samsung Galaxy Fit 2 waa jiilka cusub ee jijin samaynta Samsung ee aan ku awoodno u hoggaami qaab nololeed caafimaad leh, mahadnaq jimicsi iyo kormeer hurdo iyo waliba xusuusino lagu hagaajinayo nadaafada qofka sida gacmo dhaqashada joogtada ah.
Galaxy Fit 2 wuu soconayaa ilaa 21 maalmood oo batari ah, waqti loo soo gaabiyay 15 maalmood haddii aan si joogto ah ugu isticmaalno si aan ula soconno dhaqdhaqaaqa cayaarahayaga. Shaashadda nooca AMOLED waxay leedahay 1,1 pips iyo xallinta 126 × 294 pixels, waxay si otomaatig ah u ogaanaysaa nooca jimicsiga aan sameynayno waxayna cabireysaa kalooriyada gubatay, garaaca wadnaha, masaafada la safray….
Dhumucda qaabkani cusubi waa 11.11mm, culayskiisu waa 21 garaam, waan awoodnaa si fudud u astaysto ka badan 70 qaybood oo kala duwan, waa la quusin karaa ilaa 50 mitir waxayna leedahay shahaado 5ATM ah, sidaa darteed waan u isticmaali karnaa waqti kasta iyo goob kasta annaga oo aan ka walwalaynin sharafta jijimadda.
Gudaha waxaan ka helnaa nidaamka hawlgalka ee FreeRTOS, 2 MB oo RAM ah, 32 MB oo keyd ah, Bluetooth 5.1. Ayaa laga heli karaa midabyo madow iyo casaan ah (Madoow iyo Casaan) waxaana lagu heli karaa 49 euro bogga Samsung, inkasta oo waxaan ka heli karnaa Amazon wax ka yar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung Galaxy Galaxy 2 Samsung ayaa haatan laga heli karaa Spain 49 Euro
Kahor intaan la bilaabin Latin America, Disney + waxay dhaaftay 70 milyan oo macaamiil ah